William Hill Ongorora
888 mutambo wongororo
Unibet Casino ndeimwe yekare uye yakamiswa kwazvo mitsara pasi, uye achangopemberera ake 20 chiitiko. Yakatangwa mukati 1997 naAnders Strom, chiratidzo chake chaive chekuti agovane ruzivo rwake rwakakura rwemitambo, saka mutambi anogona kuita yakawanda yemakinino uye mamwe ruzivo. Ichi chiratidzo …
Bwin anonyanya kuzivikanwa webhuku rebhuki muSpain uye pasi rese. BetandwinIn ambotaurwa pamusoro uye akagadzirwa mukati 1997 muAustria, pakutanga na 12 vashandi vanotora chikamu mukubhejera kwepamhepo. Makore edu matatu apfuura uye mune 2001 vakafambisa mashandiro avo kuGibraltar. Kuwanikwa uye kuwedzera kwe …
Tine suite yepamhepo mawebhusaiti ayo anotarisana nemhando dzakasiyana dzemitambo uye anorarama makasino mitambo. Kunyangwe iyo kambani yakatanga kushanda mukati 1997 muLondon, hazvina kumboitika kusvikira pakumuka 2008, apo chikamu chakakosha chakagadzirwa pane iyo mutsara 888 Sports Holdings. zadzisa sarudzo dzevaraidzo uye …
Sezvo rakareba runyorwa rwemitambo yenyika pamwe nevekunze, Betfair ine nhoroondo refu sekubheja. Zvakatanga mumakore 90, kunyanya mukati 1999, yakavambwa naAndrew naEdward Wray Black. Asi zvaingova chete munguva pfupi yapfuura payakatanga kuwedzera kwayo muUnited Kingdom uye kuwedzera misika yayo muIreland uye United States. Kubva ipapo, …
pamhepo mitambo yemitambo yangoitika. Vatambi vanotenderera pasirese vanoshandiswa kuve pamba, mazhinji emitambo yavo yemakambani anozivikanwa e-kasino. Mune ino Betsson.com wongororo yakanangana nerondedzero yeimwe yeiyi online kubhejera marenki. Kugadzira mari pawebhu …
SER Circo Casino yakanyatso kuongororwa uye yakatipa zita rakanaka chaizvo, inopa kukosha kwakanyanya. Mukudzidza kwedu, isu tafunga nezvichemo zvemutambi, mafungidzirwo emari, uine rezinesi rechokwadi, mhando yebasa, mamiriro, kudzorera zvakanakira uye zvisingakwanisi, nezvimwe zvinhu. Circus Casino yakabatana ne …
Vatambi vakanyoreswa kuInntwetting Casino vanopihwa mubairo wekutambira kune yavo yekutanga dhipoziti. Zvirinani 10 € bhonasi 100% yemari yakabhadharwa, huwandu hwakawanda hwe 100 €. Aya makoponi anoshanda kune ese maInternwetting mitambo, asi handizvo …
Luckia Casino PT yakaongorora uye inopa mukurumbira wakanaka kwazvo, zvinoreva kuti kasino huru. Mukudzidza kwedu, isu tafunga nezvichemo zvemutambi, purofiti fungidziro, sechokwadi rezinesi, mhando yebasa, mamiriro, kubatsirwa uye miganhu yekubhadhara uye zvimwe zvinhu. Pazasi, verenga iyo nyaya uye zvinyorwa …
Suertia Casino yakaongorora uye yakatipa mukurumbira wakanaka, zvinoreva kuti yakanaka kwazvo kasino. Semaonero edu, tsvaga kunyunyuta kwemutambi, zvakanakira zvekufungidzira, rezinesi, chokwadi chetafura, vatengi vane masevhisi emhando yepamusoro, nyika, purofiti yemari uye …
Pakati penzvimbo dzakasiyana siyana dzinozivikanwa mumitambo mumakore apfuura, pamwe anopfuura William Hill. Zvakaoma kusanzwisisa kuti nei tichitenda musimboti kuti ndeimwe yemitambo yekare yemukana. Ichi chiito chave chinzvimbo chakakurumbira muParis mu 2000, paakatanga kuenda …